Ukumaketha, Ukuthengisa Nensizakalo: Imithetho Emisha Yokubandakanya Amakhasimende | Martech Zone
Ukumaketha, Ukuthengisa Nensizakalo: Imithetho Emisha Yokubandakanya Amakhasimende
NgoMsombuluko, Disemba 9, 2013 NgoMsombuluko, Disemba 9, 2013 UKelsey Cox
Njengoba imithombo yezokuxhumana inika amakhasimende izwi elikhulu kunakuqala, izinkampani ezihlakaniphe kakhulu zishintsha indlela eziya ngayo kwezentengiso, izinsizakalo zamakhasimende nokuthengisa. Nsuku zonke, abathengi baseMelika babamba izingxoxo ezihlobene nomkhiqizo eziyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-2.4. Inkampani yakho izokhulunywa kanjani ngayo? Amakhasimende ajabule angumngani omkhulu wenkampani futhi akusize uqonde imithetho emisha yokubandakanya amakhasimende, SAP ihlanganise yonke imininingwane ebalulekile ku-infographic engezansi.
Yize imikhiqizo yenkampani ibalulekile, ngama-40% kuphela abantu abazimisele ukuncoma ukuthi inkampani inqunywe yimibono yabo ngemikhiqizo futhi ama-60% anqunywa yimibono yabo yenkampani uqobo. Yize inkampani ingasakwazi ukulawula inkhulumomphendvulwano ezungeze inkampani yabo, bangayinaka nakanjani futhi bayakhe ngokukhanya okuhle kakhulu.
Uma kukhulunywa ngokuthengisa, amakhasimende adinga ukubandakanyeka futhi izinkampani ezihlakaniphile zingakwenza lokhu ngokuqonda izinselelo ezihlukile zamakhasimende abo, zixhuma nazo kusenesikhathi ukuze zilolonge umbono wazo, futhi zenze okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kokuthenga abangakwazi ukulinda ukutshela abangani bazo ngakho .
Ukuhlinzekwa kwamakhasimende osezingeni lomhlaba kubalulekile ekwakheni abameli bamakhasimende. Ama-59% wamakhasimende angazimisela ukuzama umkhiqizo omusha ukuthola insizakalo yamakhasimende engcono. Uma wazi okuningi ngamakhasimende akho kunalokho abakwaziyo ngawe, ungaqiniseka ukuthi umkhiqizo wakho uhlala ukhulunywa ngawo kakhulu.
Tags: ibhizinisiukuzibandakanya kwamakhasimendeisipiliyoni samakhasimendeInsizakalo yekhasimendemarketingUkunika Amandla Ukuthengisasocial media
Dec 12, 2013 ngo-1: 24 PM
I-athikili ethokozisayo! Kuchazwe kahle ngemidwebo yolwazi ecabangayo. Ngiyavuma ngokuphelele ukuthi amakhasimende ajabule angabangane abakhulu benkampani